मुनाको मृत्युः सिसिटिभीमा कैद भएको त्यो प्रतिविम्बित दृष्य… - Khabar Break | Khabar Break
काठमाडौं, १ फागुन । ‘खै के भन्ने ? एउटा अँध्यारो कोठा जस्तो देखियो। उसले गरेको हो कि होइन केही भन्न सकिनँ।’
घटना कसरी भयो ? कसले गरायो ? अनि किन ?
‘हत्या नै भएको देखिन्छ। युवकले नै हत्या अनि आत्महत्या गरेका खुल्छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेकप्रसाद राई भने।
बन्द घरभित्रको कहालीलाग्दो घटना। केही घण्टामै हत्या र आत्महत्याको निर्क्योलमा कसरी पुग्यो प्रहरी ? के थियो त्यस्तो ‘क्लू’ ?
प्रहरीको एउटै उत्तर– सिसिटिभी फुटेज।
प्रहरीको ‘क्लू’ सिसी क्यामरा
एक रोपनीभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा बनेको नयाँ छ कार्कीको, साढे दुई तले घर। घरभित्र छिर्ने एउटामात्र मूलगेट। घरमा कार्की दम्पती, एक दश वर्षीय छोरा र कामदार चौधरीमात्र। एक छोरी अमेरिका अर्की बेलायत।
कार्कीको घरमा पार्ट टाइमर चालक छन्। जो काम पर्दामात्र आउने। कार्कीका छोरालाई स्कुल पुर्‍याउन र फिर्ता ल्याउने चाहिँ उनको नियमित काम। त्यसदिन ती ड्राइभर आए छोरालाई स्कुल पुर्‍याएर गाडी घरमै ल्याए अनि आफ्नो बाटो लागे।
भान्छामा क्यामरा जोडियो ? धेरैले यस्तै प्रश्नमा लख काटिरहे।
खासमा सिसी क्यामरा भान्छामा होइन, भान्सा बाहिर रहेछ। जसले सिसामा देखिएको प्रतिविम्वलाई कैद गर्‍यो।
भान्छा बाहिरको सिसी क्यामराले कैद गरेका दृष्यबाट नै घटनामा संलग्न देखिएको एसएसपी राईले बताए। बाहिर जोडेको सिसी क्यामराले भित्रको दृष्य चाहिँ कसरी कैद गर्‍यो ?
‘भित्रको दृष्य कैद भएको होइन। अरु सिसिटिभीको फुटेज जस्तो छैन,’ एसएसपी राईले फुटेजबारे भने, ‘सिसिटिभीमा सिसामा देखिएको प्रतिविम्वबाट घटना खुल्छ। तर, के के भयो पूरै चाहिँ देखिन्न।’
त्यसो त सिसिटिभी क्यामरालाई छलेर कोही भित्र छिर्न सक्दैन भन्ने तर्क चाहिँ गर्न मिल्दैन। कोही त्यसैगरी त भित्र छिरेको थिएन ?
‘सिसिटिभि फुटेजलाई मात्र होइन अन्य आधार पनि खोजेका हौं। घटनास्थल, भेटिएका प्रमाण, हत्यामा प्रयोग भएका सामग्री समेत केलाएका छौँ,’ एसएसपी राईले भने।
प्रहरीले प्रमाण मानेको फुटेज विजयका बुबा जानकी चौधरीले पनि हेरेका छन्। उनलाई लागेको थियो – फिल्ममा जस्तै प्रस्ट देखिन्छ। तर, भएन त्यसो।
के छ क्यामरामा कैद दृष्य ?
प्रहरीले घटनामा प्लास्टिकको पिर्काको टुक्रा, धारा नजिकै लत्पतिएको रगतलाई अनुसन्धानको निस्साको रुपमा लिएको छ। युवकले डोरीले घाँटीमा कसेर लडाएपछि पिर्काले टाँउकोमा हानेको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ। ुभाच्चिएको पिर्का सँगै भेटिएको छ। रगत लागेको छ त्यसमा। त्यसैले हानेको हुनुपर्छ,ुमहानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले भने।
‘हामीले अरु कामदारसँग सोधपुछ गरेका छौँ। उनीहरुबाट केही खुल्न सकेको छैन,’ परिसरकी प्रवक्ता एसपी दुर्गा सिंहले सुनाइन्।
‘एक जना व्यक्ति आएको देखिन्छ। त्यतिखेर के हो भनेर हामीले अनुसन्धान गर्‍यौँ। उनी प्लम्बर रहेछन्। घरबाहिर नै काम गरेर फर्किएको देखियो,’ एसपी दुर्गा सिंहले भनिन्।
घटना किन त ?
अहिलेसम्म कार्कीको हत्या कारण खुलिसकेको छैन। ‘हामी पनि घटनाको मोटिभ के हो भन्नेमात्र खोजिरहेका छौँ। अहिलेसम्म केही भेटिएको छैन,’ एसएसपी राईले भने।
कतै घरमा काम गर्दा गाली खाएकाले त्यसकै रिसले हत्या त गरेका होइनन्रु प्रश्न चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर, मृतकका बुबा जानकी चौधरी छोरोको व्यवहार त्यस्तो नभएको र घरबेटीबारे कहिल्यै गुनासो नगरेको सुनाए।
‘कुनै रिस र इगो मनमा भए मानिसले हत्या गर्छ। जब उसलाई आफूले गल्ती गरेँ र अब भाग्न सक्दिनँ भन्ने रियलाइज हुन्छ, आत्महत्या गर्ने गर्छ,’ ठकुरीले भने।